Taom-pianarana 2018-2019 Lava loatra, reraka ny mpianatra
Tena misy fiantraikany amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny mpianatra ny halavan’ny taom-pianarana tamin’ity taona 2019 ity.
Mahatratra 11 volana amin’ny 12 volana mantsy izany raha migadona ny faran’ny volana aogositra. Ny 1/3-n’ny mpianatra isan-kilasy sisa vokatr’izany no tonga mamonjy ny sekoly raha araka ny fanadihadiana natao tetsy amin’ny lisea La Prime Anosibe. Misy amin’ireo mpianatra no miala avy hatrany ary tsy mipoitra intsony, hoy ny talen’ny sekoly Lanto Solonandriana raha misy ihany koa ireo tsy manana fahafahana ny handoa saram-pianarana intsony ka aleo milentika avy hatrany. Amin’ny ankapobeny anefa dia mbola amin’ny volana aogositra vao manatanteraka ny fanadinana fifindran-kilasy ny sekoly tsy miankina ary mifarana mihitsy io volana io vao miditra amin’ny vakansy lehibe. Nomarihin’ity talen-tsekoly iray ity fa tsy mampaninona ireo ray aman-dreny sasany izany noho ny mbola fisian’ireo sekoly mandray mpianatra vaovao tsy mila biletà. Ho azy ireo kosa dia tsy azo ekena velively izany entina hanatsarana ny fahaizan’ny mpianatra. Mikasika izay fampianarana izay ihany moa dia misy amin’ireo sekoly tsy miankina no nilaza ny tsy hampianatra anio zoma noho ny fisian’ilay lalao baolina kitra nifanandrinan’ny ekipam-pirenena Barea sy ny Tonizia halina.